रुखमा आमाले खिचिन् छोराको फोटो, घर पुगेर फोटो हेरेपछि निन्द्रा भयो गायब ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/रुखमा आमाले खिचिन् छोराको फोटो, घर पुगेर फोटो हेरेपछि निन्द्रा भयो गायब !
इंगल्याण्ड नजिकैको नर्थम्बर’ल्याण्डमा एक महि’ला केही दिन यता सुत्नै नसकेको दाबी गरिरहेकी छिन् । आफ्नो छोराको पछाडि भूत’जस्तै देखिने अपरिचित बालक’को अनुहार र छोराको काँध’मा उनको हात देखेदेखि उनी डराए’की छिन् ।
लाउराले गत सोमबार नर्थम्बरल्याण्ड’स्थित प्लेसी वुड्स कन्ट्री पार्कमा परिवारसँग पिकनिक गएका बेला खिचेका थुप्रै तस्बिरमध्ये एउटा तस्बिर भिन्न भेटियो ।१५ वर्षीया लाउरा’की छोरी चा र्लोट र १६ वर्षे ज्याक ठूलो रुखमा चढे भने ९ वर्षीय उनका छोरा बाइरिन वाट्सन रुखमुनी अडेस लगाएर फोटो खिचाए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मेडिकल रिसेप्सनिष्ट लाउरा’ले ती फोटो घर आएर हेर्दा बाहिरिनको पछाडि अर्को बालकको फोटो देखेपछि उनी तर्सि’एकी हुन् । त्यहाँ उनीहरुबाहेक अन्य कोही व्यक्ति नभ’एको उनको दाबी छ । भूतबारे पहिले विश्वास नगर्ने उनलाई उक्त फोटोले भूत’प्रति विश्वास जगाए’को उनले बताएकी छिन् ।
उनले उक्त ठाउँमा पुनः जाने सोच बना’एको जान’कारी दिँदै आफ्नो भूत’प्रति रुची बढेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई ती बालकले घरसम्म नपछ्याओस् भन्ने आशा छ ।’न्यूक्यासलकी लाउरा भन्छिन्, ‘यो निकै असाधारण हो र यसले सबैलाई त्र सि त बनाएको छ । म र मेरी छोरी हिजो राती सुत्नै सकेनौं ।
हामी निकै डरा’एका थियौं ।‘मेरो श्रीमानको नाइट ड्युटी परेको छ । म घरमा एक्लो छु । उनले हामीलाई पछ्याए’का छन् कि भन्ने डर गढेको छ ।’‘फेसबुकका मेरा साथीले हाम्रो निम्ती प्रर्थना गरिरहेका छन् ।’‘मैले यस्ता कुरालाई पहिले वाहियात भन्थें । मैले आफैंले देखेपछि मात्र विश्वास भयो ।’ एजेन्सी
प्रमे बिबाहपछि बेहुली लिएर आएका आफ्नै भाइलाई दाइले गो, ली हा’नेर सि’ध्याइदिए